मह कसरी खाए अमृत, कसरी खाए विष समान ? | NepalDut
मह कसरी खाए अमृत, कसरी खाए विष समान ?
महको स्वाद थाहा नपाउने मानिस सायदै होलान् । महको उचित मात्रा मिलाएर सेवन नगर्दा यसले फाइदा भन्दा बेफाइदा नै बढी छन् । महको प्रयोग विभिन्न रोग निवारणमा प्रभावकारी मानिन्छ । महको नियमित सेवन गर्दा यौन क्षमता बढाउनुका साथै यौन क्षमतालाई बचाइराख्न पनि मह खानुपर्छ । यसका अलवा महले व्यक्तिको स्मरण शक्ति बढाउँछ । खानामा रुची बढाउन, खोकी, कब्जियतजस्त रोग निको पार्न मह उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ ।
अल्सरका रोगीले नियमित महको सेवन गर्दा निको हुन सहज हुन्छ । आयुर्वेद विज्ञानमा मात्र नभएर एलोपेथिक उपचार पद्धतिमा समेत महलाई गुणकारी औषधिका रुपमा मान्यता दिइएको छ । तर आजभोली महमा हुने मिसावटले स्वास्थ बनाउन भन्दा नयाँ नयाँ रोगहरु निम्त्याउने गरेको छ । महले थकान कम गर्छ । अत्याधिक गर्मीको बेला मह खाएपछि तातो पानी, दही, चिनी वा कफी खानु हुँदैन । दैनिक एक देखि दुई चम्चा मह मनतातो पानीमा वा दुधमा मिसाएर खानु राम्रो मान्छि ।
– माछा, मासुसित मह खानु विषसरह हुन्छ ।